नेपालमा कोरना भाइरस छिर्यो भन्दै भारतीय मिडियाले लेखे गलत समाचार र गरे गलत प्रचार ! – " सुलभ खबर "
नेपालमा कोरना भाइरस छिर्यो भन्दै भारतीय मिडियाले लेखे गलत समाचार र गरे गलत प्रचार !
दार्चुला । दार्चुलामा हालसम्म कुनैपनि व्यक्तिमा केभिड १९ अर्थात् नोबेल कोरोेना भाइरसको सं’क्रमण नदेखिएको नेपाली चिकित्सकहरुले बताएका छन् । हालसम्म दार्चुलामा कोरोना भाइरसको सं’क्रमण नदेखिएको र त्यस्तो सम्भाना पनि कम रहेको स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका जनस्वास्थ्य अधिकृत जयराज भट्टले बताउनु भयो । ‘हालसम्म दार्चुलामा कसैमा पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन, कोरोनाको सं’क्रमणको सम्भावाना न्युन छ’ जनस्वास्थ्य अधिकृत भट्टले भन्नु भयो ।
‘न्युज पीथौरागढ टिभी’ नामक अनलाईन मिडियाले दार्चुलाका एक युवामा कोरोना लक्षण देखिएको भन्ने समाचार प्रकाशित गरेपछि नागरिक स्तरमा त्रास फैलिएको छ । उक्त समाचार पश्चात् दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलंगा क्षेत्र झन् त्रसित बनेको छ । यस्तै दैनिक नेपाल लगायतका नेपाली मिडियाहरुले पनि भारतीय मिडियालाई श्रोत बनाएर समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । तर भारतीय मिडियाले लेखेको समाचार जस्तो सत्यता नभएको नेपाली चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
भारतीय मिडियाले लेखेको समाचार निरआधार र अफबाह भएको स्वास्थ्य कार्यालय दार्चुलाका जनस्वास्थ्य अधिकृत जयराज भट्टले बताउनु भयो । ‘भारतीय मिडियाले अफबाह फैलाइदियो, सत्यता केही छैन, झन् दार्चुलामा त्यस्तो सं’क्रमणको सम्भावना पनि न्युन छ तर सतर्कता अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ’ उहाँले भन्नु भयो ।
जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा उपचारत ती युवाको पिसाबमा सं’क्रमण देखिएको र कोरोना भाइरसको कुनै पनि सं’क्रमण नदेखिएको जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका डाक्टर गजेन्द्र दुवालले बताउनु भयो । काठमाण्डौ एक होटेलमा काम गर्दै आएका ती युवक घर आएपछि एक महिनादेखि ज्वरो आएकै भरमा कोरोना सं’क्रमण भन्न नमिल्ने डाक्टर दुवालको भनाई छ । रुघाखोकी लाग्दैमा पनि कोरोना भन्न नमिल्ने भन्दै प्रयोगशालाबाट प्रमाणित हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ । ती युवालाईृ एक महिनादेखि ज्वरो आएको भएपनि कोरोना भाइरसको सं’क्रमण भएको शंका गर्ने खालका कुनै लक्षण नदेखिएको डाक्टर दुवालको भनाई छ ।
तर भारतीय उक्त मिडियाले काठमाण्डौ रिफर गरिएको समाचार सम्प्रेषण गरेको छ । जसले गर्दा दार्चुलाबासी त्रसित बनेका छन् । ‘समाचार लेख्दा सत्यतथ्य बुझेर मात्रै लेखिदिनुपर्छ, नभए नागरिकहरु त्रसित बन्छन्’ डाक्टर दुवालले भन्नु भयो । शंकास्पद लक्षण देखिएपनि ल्याबबाट पुष्टि नहुदाँसम्म सं’क्रमण भन्न नमिल्ने उहाँको भनाई छ । कोरोनाको सं’क्रमण फैलिएका शहरहरुमा भ्रमण गरेका व्यक्तिसंगको सम्पर्क बिना नै कोरोनाको सं’क्रमण नहुने चिकित्सकहरुको भनाई छ । भीडभाडमा नजान, सरसफाईमा ध्यान दिन र बाहिर हिड्दा मास्क प्रयोग गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।